Shirkii Muqdisho oo hakad galay iyo Madax ka baxday - Awdinle Online
Shirkii Muqdisho oo hakad galay iyo Madax ka baxday
In ka badan laba maalmood oo Madaxweyne farmaajo, Madaxda Dowlad goboleedyada iyo Gobolka Banaadir uu shir uga socday Xarunta Madaxtooyada ayaa wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in shirkaasi uu hakad galay.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in sababaha uu u istaagay ay kamid tahay, kadib markii aad la isugu khilaafay arrinta la xiriirta in doorashada ay maamulaan Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashayooyinka halka Badi Madaxda Dowlad Goboleedyada ay dalbadeen in la soo magacaabo guddi ka heer federaal iyo heer dowlad goboleed.
Sidoo kale wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Madaxweyne farmaajo uu kali ku noqday qodobada heshiiskii dhuusamareeb 3 sida Goobaha ay ka dhacayaan doorashada, ergada oo laga dhigayo 101-150 iyo in meesha laga saaro xisbiyada lagu galaayo doorashada.
Xogaha ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in shirkii Maanta uusan imaan Madaxweynaha Puntland, halka Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hir-Shabeelle ay barqanimadii Maanta isaga baxeen, waxaana taasi ay keentay in shirka la hakiyo.
Shirka u dhaxeeya Madaxweyne farmaajo, Madaxda Dowlad goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa uy muuqda mid fashil ku dhow, iyada oo rajadii dad badan ay ka qabaan ay hoos u dhacday.
Previous articleLaamaha Amniga oo xir xiray dad looga shakiyay Shabaabnimo
Next articleQoor Qoor oo kulamo xasaasi ah ka wada Muqdisho